Android ဖုန်းတွေရဲ့ ဘယ် Application တွေက ကိုယ့် Location ကို သုံးနေလဲ? — Anycall Mobile
By Naw Htoo Aung January 15, 2021 1 Min Read
Application တွေက ကိုယ့်ရဲ့ Permissions တွေကို အသုံးပြုခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒါကလည်း ကိုယ်ခွင့်ပြုမှသာ ရတာပါ။ ဒီနေ့မှာလည်း ကိုယ့် Android ဖုန်းမှာရှိတဲ့ ဘယ် Application တွေက ကိုယ့်ရဲ့ Location ကို အသုံးပြုနေလဲ? ဘယ်လိုပိတ်လို့ရလဲ ဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ Application တွေက ကိုယ်အသုံးမပြုတဲ့အချိန်မှာတောင် ကိုယ့် Location ကို ခြေရာခံနေပါတယ်။ ဒါတွေကို ကိုယ်က အဲ့ဒီ Application သုံးတဲ့အချိန်မှာပဲ Location ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးမယ်။ ဒါမှမဟုတ် Location အသုံးပြုတာကို ခွင့်မပြုချင်ရင်လည်း ရပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ Location ကို Application သုံးတဲ့အချိန်မှာပဲ သုံးချင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပိတ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ “Setting” ထဲက “Privacy Protection” ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ “Location” ထဲဝင်လိုက်ပါ။ Application ကို အသုံးမပြုလည်း နောက်ကွယ်က Location Access ရနေတဲ့ (Allow all the time အောက်မှာရှိတဲ့) Application တွေထဲ ဝင်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ ကိုယ်က အဲ့ Application သုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Location ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ “Allow Only While Using the App” ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ဘယ်အချိန်မှာမှ Location မဖွင့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ “Deny” ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
ဒီလိုလုပ်ပေးထားခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ Application တွေကပဲ ကိုယ့် Location ကို အသုံးပြုလို့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။